အားကစားတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကျင်းပမည်လို့ BBC ရုပ်သံအတည်ပြု - YTV
Home » Programs » Sports » အားကစားတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကျင်းပမည်လို့ BBC ရုပ်သံအတည်ပြု
အားကစားတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကျင်းပမည်လို့ BBC ရုပ်သံအတည်ပြု
Sports October 15, 2020 12:30 pm
ကမ္ဘာ့ နာမည်ကြီး အားကစား ရုပ်သံလိုင်း ဖြစ်တဲ့ BBC အနေနဲ့ အခုနှစ် အတွက် အားကစား တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ပရိသတ် မပါဘဲ ကျင်းပမယ်လို့ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါတယ်။.အခမ်းအနားကို အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဆယ်လ်ဖို့ဒ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ စတူဒီယိုတွေမှာ သတ်မှတ်လူဦးရေ အနည်းငယ်နဲ့သာ ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်…..
BBC ရုပ်သံလိုင်း အနေနဲ့ အခမ်းအနားမှာ နည်းပညာ အကူအညီနဲ့ ပရိသတ် အသံတွေကိုပါ ထည့်သွင်း တင်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စကော့တလန် နိုင်ငံ အဘာဒင်းမြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားမှာတော့ ပရိသတ် စုစုပေါင်း တစ်သောင်း အထိ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်. အခုနှစ် အတွက် အခမ်းအနားကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး ကိုဗစ် စည်းမျဉ်းတွေအရ သတ်မှတ် လူဦးရေ အနည်းငယ်နဲ့သာ ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
အားကစား တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ ပါဝင်သူတွေကိုလည်း ပွဲ ကျင်းပမယ့် စတူဒီယိုဆီကို ဖိတ်ကြားဖို့ မသေချာဘူးလို့ သိရပါတယ်……
Sourse / Photo ; Internet